Konferansa gvSIG iraisam-pirenena faha-15 - andro 1 - Geofumadas
Novambra, 2019 jeospatial - GIS, GvSIG, fanavaozana
Ny Konferansa gvSIG Iraisam-pirenena faha-15 dia natomboka tamin'ny 6 Novambra, tao amin'ny Sekoly Teknika Higher of Geodetic, Cartographic and Topographic Engineering - ETSIGCT. Ny manokatra ny hetsika dia notanterahan'ny manampahefana ao amin'ny University Polytechnic of Valencia, ny Generalitat Valenciana ary ny Tale jeneralin'ny gvSIG Association Alvaro Anguix. Ireo andro ireo dia nifanindry tamin'ny gvSIG Desktop 2.5, izay efa vonona alaina.
Amin'ny maha Geofumadas, nanapa-kevitra izahay ny hanatrika ity hetsika ity manokana, mandritra ny telo andro, hahafantatra hoe inona no nasehon'ity atrikasa rindrambaiko maimaimpoana ity, izay androany no teraka tamin'ny tontolon'ny Hispanika miaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena lehibe indrindra.
Tamin'ity andro voaloham-potoana ity ny fotoam-pivoriana voalohany momba ny famelabelarana, dia miandraikitra ny solontenan'ny Institut Cartografic Valencià - Generalitat Valenciana, ny CNIG - Ivotoerana Nasionaly momba ny fampahalalam-baovao amin'ny Espana ary ny toetran'ny Governemanta Uruguay, izay nanolotra ny IDE Uruguay nampiharina tao amin'ny gvSIG Online.
Taorian'izay dia nitohy ny andiany faharoa, izay iadian-kevitry ny IDE. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanolotra ny fandinihan'izy ireo momba ny raharaha momba azy ireo ny solontenan'ny Ivotoerana Thematic European University of Malaga No fanafody hanasitranana. MED Biodiversity. Avy eo, Raúl Rodríguez de Tresca - IDB dia naka ny gorodona, nanolotra ny volavolan-dalàna Geoportal ho an'ny fitantanana arabe ao amin'ny Repoblika Dominikanina, hiteraka teknolojia fanohanana eo amin'ny fitantanana ny fikajiana ny tamba-jotra sy ny tetezana. Ankoatr'izay, nilaza i Rodriguez fa ny maha zava-dehibe ny asany dia ny fahitana olona marobe amin'ny fahalalany.
"Ny zava-bitantsika dia ny fisokafan'ny saina, misy ny olon-tsotra ankehitriny mifandraika amin'ny tetikasa izay mangataka ny fidirany hiditra ao amin'ny sehatra sy hanodinana-hitantana ireo angon-drakitra."
Amin'ity sakana tsy mitovy ity dia nasehon'i Ramón Sánchez de Sans2 Innovación Sostenible SL gvSIG Fitaovana mifantoka amin'ny fanaraha-maso ny fotodrafitrasa, izany hoe ny fomba ahafahana mampifandray ireo rafitra fanaraha-maso sy mampiditra azy miaraka amin'ny GvSIG GIS maimaimpoana, hampiroborobo ny fanaraha-maso ny fotodrafitrasa sy ny valiny mahomby amin'ny fotoana misy hetsika.
Ny sakana fahatelo amin'ny andro mifandraika amin'ny fampidirana, nataon'i Joaquín del Cerro, solontenan'ny Fikambanana gvSIG, dia nanolotra ny fanatsarana sy fanavaozana ny rafitra ho an'ny Ny fitantanana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fanarahan-dia amin'ny ARENA2 an'ny Tale jeneraly foibe fifamoivoizana amin'ny gvSIG Desktop. Oscar Vegas etsy andaniny, nanolotra ny Ny fizarana boky ho an'ny modely amin'ny tambajotra fitaterana rano avy amin'ny gvSIG miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana ConvertGISEpanet sy RunEpanetGIS, izay fitaovana hiteraka modely hidiran'ny tambajotra fitaterana rano, hita taratra ny fomba famindrana ny fampahalalana amin'ny GIS, ary koa ny fahatsaran'ny fiovam-po sy ny fampisehoana data.
Izahay dia manohy amin'ny fanolorana farany ny 4to block miaraka amin'ny fanolorana ny Iván Lozano de Vinfo VAL, izay tena naseho ho VinfoPol, dia nanatsara ny fizotran'ny fizarana rehetra, avy amin'ny toerana, famantarana ny mombamomba ny heloka bevava, ny fisian'ny karama sy ny hafa. Ity fitaovana ity dia namboarina ho toy ny efijery, izay ahafahanao mitantana ireo trangan-javatra rehetra ao amin'ny sehatry ny polisy, "mamorona fitantanana feno izahay hitantana ny rafitra iray izay iasan'ny polisy avy amin'ny programa tokana."
Farany dia tonga amin'ny faran'ny foto-kevitra miaraka amin'ny lohahevitry ny finday finday isika. Ao amin'ity fizarana ity, tantara momba ny fahombiazana no naseho izay natao tamin'ny fitaovana finday, ohatra, Engineer Sandra Hernández avy ao amin'ny Autonomous University of Mexico, dia naneho vaovao momba ny Fandaminana sy fanangonana angon-drakitra ao an-tsaha amin'ny alàlan'ireo rindranasa finday sy fitaovana, ho fanombanana ny fandehanana an-tsary ao amin'ny Ivotoerana ara-tantara ao Toluca. Noho io tetik'asa io dia afaka naneho sary an-tsaina ny asa eny an-tsaha natao tamin'ny fampiharana finday gvSIG, izay maimaim-poana ary miasa ivelan'ny Internet raha tsy mifandray amin'ny Wi-Fi na tambajotra data, ireo vaovao rehetra voangona taty aoriana dia ho zahana ary hodinihina ao amin'ny gvSIG Desktop. hiteraka tatitra momba ny firotsahan'ny olom-pirenena tao Toluca sy ny foto-drafitrasa ananany ho an'ny fandehan-dry zareo malalaka.
Ny fikambanana gvSIG dia mampiroborobo ny fampidirana ao amin'ny federasiona tsy avy amin'ny fikambanana na orinasa lehibe ihany fa aharihary ny asan'ny iray amin'ireo mpianatra ao aminy, Glene Clavicillas miaraka amin'ny tetikasany. Fanatanterahana ny sarimiaina fambolena amin'ny alàlan'ny famakafakana multitemporal ny sary zanabolana sy ny sarimiaina cadastral.
Ny andro tolakandro dia nitohy tamin'ireo atrikasa, izay maro no nanao sonia maimaim-poana. Ny atrikasa dia nahitana lohahevitra toy ny gvSIG ho an'ny fanombohana, famakafakana angona miaraka amin'ny gvSIG na ConvertGISEpanet - RunEpanetGIS - gvSIG ho an'ny fikarakarana ny mombamomba ny tambajotra famatsiana rano.
Raha lalana iray miala an'i Valencia ianao, dia mbola misy roa andro sisa; izay antenainay handrakofana ny dinidinika amin'ireo mpilalao fototra izay hanome antsika ny vinavinan'izy ireo ny toerana heverin'izy ireo fa handeha gvSIG amin'ny taona manaraka.
Previous Post«Previous Gazety Geo-Engineering & TwinGeo - Fanontana faharoa
Next Post Konferansa gvSIG iraisam-pirenena faha-15 - Andro 2manaraka »